Shirka Amniga Qaranka oo Ka Furmaya Garowe - Halbeeg News
Shirka aminga qaranka ayaa la filayaa in maanta oo arbaca ah uu ka furmo magaalada Garowe, caasimadda dowlad goboleedka Puntland.
Shirkan oo ay qaban qaabisay wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qeyb geli doona wasiiradaha amniga ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Shirka ayaa diiradda lagu saari doona guulihii amniga ee ay gaareen maamul goboleedyada iyo sidii loo saara loogu qaadi lahaa ammaanka.
Ka qeyb galayaasha shirkan ayaa la filaya in si qota-dheer ay u falan qeeyaan qaabkii loo xasilin lahaa magaalooyinka waaweyn, furidda wadooyinka, ka qeyb qaadashada howl galada ka dhanka ah Al-shabaab iyo sidii ciidamada iyo qiimeynta awoodda ciidamada Soomaaliyeed ay u leeyihiin gacan ku haynta deegaannada laga saaro kooxda Al-shabaab.
Dowladda Soomaaliya ayaa wajahaysa caqabado adag oo la xariira dhanka ammaanka ah tan iyo markii lagu sameeyey qaab dhismeedka amniga qaranka.
Dowladda Federaalka ayaa bilawday isku dhafka ciidamada kala duwan ee ay gacanta ku hayaan dowlad goboleedyada iyadoo qaar kamid ah ciidamada Puntland iyo Jubbaland lagu dhafay ciidamada xoogga dalka.
Sida qorshaha isku dhafka uu yahay, Soomaaliya ayaa yeelan doonta 18,000 askari. dowladda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa hormarinta, qalabeynta iyo tababaridda ciidamada xoogga dalka si ay u hantaan ammaanka guud ee dalka.
Khubad Jeedinta Musharraxiinta Golaha Shacabka oo Maanta Billaabaneysa